Wararkii ugu dambeeyay xaaladda ka dhalatay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay xaaladda ka dhalatay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda ka dhalatay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed
Xamdi Maxamed waxay ka mid ahayd ardaydii sanadkan u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee Dugsiga Sare, kuna soo baxday imtixaankii adkaa, ee ay martay. Sidoo kale waxay Xamdi Maxamed noqoneysaa ardayadii labadii ee sanadkan imtixaanka ku baastay ee la dilo, marka laga soo taggo Taabit Cabdullaahi Xasan Raabi, oo Jimcihii ku dhintay ismiidaamintii ka dhacday Magaalada Kismaayo.
Cabdullaahi Goodax Barre, Sii Hayaha Wasiirka Waxbarashada Somaliya ayaa sheegay in kuwii falkaasi u gaystay gabadha, ay baabi’iyeen hamigeedii iyo weliba rajadii ay reerkeeda ka lahaayen.
“Waxaan aad u cambaareynayaa kufsiga iyo dilka foosha xun ee loo geystay Allaha u naxariistee Xamdi Maxamed Faarax, oo ka mid ahayd ardaydii sanadkan u fariisatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Dugsiga Sare. Waxay baabi’iyeen hamigeeda iyo rajadii ay reerkeeda ka lahaayen. Kufsiga iyo ku xadgudubka gabdhaheena sharafta leh waa dambi iyo diin la’aan, waana dhaqan aad u xun oo maalmahan nagu soo xoogeystay. Waxaan ka codsanayaa Hay’adaha Garsoorka in ay sida ugu dhaqsaha badan ay mudankooda ku marsiiyaan wuxuushtii falkan foosha xun ku dhaqaaqday.” Ayuu yiri Wasiir Goodax oo warkan ku sheegay bartiisa xiriirka bulshada ee Twitter.
Masuuliyiinta iyo shacabkuba waxay dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno kuwii ka masuulka ahaa falkaasi, isla-markaana la marsiiyo waxa uu mudankoodu yahay.
Su’aalse waxay ka taagantahay hay’adaha ammaanka iyo garsoorkuba ma meelmarin doonaan waxa laga dalbanayo mise sidii looga bartay ayay kiiskaana isu daba-marin doonaan.
Si kastaba ha-ahaatee dhacdadan ayaa taabatay dareenka shacabka Soomaaliyeed, waxayna noqotay midda loogu hadalhaynta badanyahay.